Lavazza USA Iikhowudi zekhuphoni
I-15% icinyiwe Sineekhowudi ezintathu zekhuphoni zeLavazza namhlanje, zilungile kwizaphulelo ku-lavazza.com. Abathengi bagcina i-avareji ye-3% xa bethenga kunye namatikiti kwi-lavazza.com, ngesaphulelo esikhulu sanamhlanje singama-18.3 eerandi ekuthengeni kwakho. Ikhowudi yethu yonyuselo yeLavazza yamva nje yongezwa ngoJulayi 25, 9. Ngokomndilili, sifumana ikhowudi yekhuphoni yeLavazza rhoqo kwiintsuku ezingama-2021.
Kule Mpelaveki Kuphela! Iipesenti ezingama-25 zikhutshiwe Iikhowudi zokunyusa i-Lavazza, iikhuphoni kunye neentengiso, ngo-Agasti ka-2021. Gcina i-BIG w / (2) I-Lavazza iqinisekisile iikhowudi zokunyusa kunye neekhowudi zokuthenga ezigciniweyo. Abathengi bagcine i-avareji ye- $ 15.38 yeekhowudi ze-L / Lavazza, iipesenti ezingama-25 zesaphulelo, izivumelwano zokuhambisa simahla. I-Lavazza emkhosini kunye nezaphulelo eziphezulu, izaphulelo zabafundi, iikhowudi zokuthengisa kunye neLavazza.com Iikhowudi zeReddit.
I-25% eyongezelelweyo ikhutshiwe kwiSizaiwde Wamkelekile kwiphepha lethu lamakhuphoni eLavazza, uphonononge izaphulelo kunye neziphulelo zangoku ze-lavazza.us kunye neepromos zikaJulayi 2021. Namhlanje, kukho amatikiti ayi-9 eLavazza kunye nezaphulelo. Unokucoca ngokukhawuleza iikhowudi zokunyusa zeLavazza ukuze ufumane izithembiso ezizodwa okanye eziqinisekisiweyo.